တော်လှန်ရေး သတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒိုင်ယာရီ (အပိုင်း ၁၅) ~ Htet Aung Kyaw
2:24 PM Htet Aung Kyaw4comments
DVB ဘန်ကောက်ဗျုရို ရုံးခန်းဖွင့်ပြီ
၉၉၉၉ လုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ဘာမှမဖြစ်တဲ့အတွက် နယ်စပ်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းရှိ မြန်မာအတိုက်ခံတွေ အားလုံးညည်းတွားနေချိန်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ ဖြစ်လာတာကတော့ ဘန်ကောက်သံရုံးကို မြန်မာကျောင်း သားတစုက ၀င်ရောက်စီးနင်းလိုက်ခြင်းပါပဲ။ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့၊ မနက် ၁၁ နာရီလောက် DVB ဘန်ကောက်ရုံးမှာ သတင်းမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေတုန်း ဒီသတင်းကြီးဝင်လာတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုခင်မောင်ဝင်းနဲ့ ကိုမိုးအေးတို့က မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ BLC က ကျင်းပတဲ့ သမ္မာဆတ် တက္ကသိုလ် ဥပဒေရေးရာဆွေးနွေးပွဲတခုဆီ သွားနေတာဆိုတော့ ရုံးမှာကျနော်နဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းတချို့ပဲ ရှိ ပါတယ်။
(မင်းကိုနိုင် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဘန်ကောက်သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြနေကြတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားများ)
DVB ဘန်ကောက်ရုံးအကြောင်း အကျဉ်လေးတင်ပြရမယ်ဆိုရင် ကိုမိုးအေးနဲ့ ကျနော် အော်စလိုကပြန် လာပြီးတဲ့နောက် ဘန်ကောက်ရုံးကို တရားဝင်ဖွင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလိုက်လို့ အရင်က တရားမ၀င်ဖွင့် ထားသလားဆိုပြီး မေးခွန်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဘန်ကောက်ဗျုရိုတာဝန်ခံ ကိုခင်မောင်ဝင်းနေတဲ့ အခန်းကို ဗျုရိုရုံးလို့ သတ်မှတ် ထားပေမယ့် လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ (ထိုင်းရဲဖမ်းမှာစိုးလို့) ဘန်ကောက်သတင်းထောက် ကျနော် ကိုယ်တိုင် အဲဒီအခန်းဆီ သွားခွင့်မရှိပါ။
အဲဒီလို ခိုးခိုးဝှက်ဝှက် လုပ်နေရာကနေ အခုလိုသတင်းထောက်တွေ စုဆုံအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ရုံးခန်း ဖွင့်နိုင်ပြီဆိုတော့ တိုးတက်လာတဲ့သဘောပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရုံးခန်းနေရာက အရင် ကျနော်တို့ ABSDF ကျောင်းသားအများစုအခြေစိုက်ရာ ဘန်းကပိတို့၊ ရမ်ဂဟမ်တို့ဘက်မှာမဟုတ်ပဲ ဘန်းကပိကနေ ဒေါင်း မောင်း (Don Mueang) လေယဉ်ကွင်း (အဲဒီအချိန်က သုဝဏ္ဏဘူမိ Suvarnabhumi လေယဉ်ကွင်းမရှိ သေးပါ) ဘက်သွားတဲ့လမ်းပေါ်ရှိ ရာအင်တရာ (Ramindra) လမ်းပေါ်က ကီလို ၈ လမ်းဆုံနဲ့ သိပ် မ ဝေးတဲ့အရပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သွားလာရနည်းနည်းခက်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက အဲဒီရုံးခန်းရှေ့နားလေး မှာ ရဲစခန်းတခု ရှိနေခြင်းပါပဲ။
''ရဲစခန်းရှေ့တည့်တည့်မှာ ရုံးခန်းဖွင့်ထားတော့ တခြားနယ်ကရဲ လာမဖမ်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီရဲစခန်း နဲ့ တော့ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းထားရမှာပေါ့'' လို့ ဗျုရိုတာဝန်ခံက ပြောပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ခြံဝင်းနဲ့ နှစ် ထပ်တိုက်အိမ်ရုံးခန်းဆိုတော့ မသိတဲ့လူတွေအတွက် အထင်ကြီးချင်စရာပါ။ (၂၀၀၈ ခုနှစ်က ဒေါ်လာ ၃ သိန်းလာဘ်စားပြီး Burma VJ တာဝန်ခံက ၀ယ်ထားလို့ DVB ကပြန်သိမ်းထားတယ်ဆိုတဲ့ ဘန် ကောက်ဗျူရိုရုံးခန်နီးနီး သားနားပါတယ်)။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အတုတွေ၊ ဘာလက်မှတ်မှ မရှိတဲ့ ဒုက္ခ သည်တွေ စုပေါင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာတခုအဖြစ် ရဲတွေကိုယ်တိုင်က ထင်ထားပုံမရပါ။ ပိုပြီး အ ထင်ကြီးစရာအချက်ကတော့ ဒီရုံးခန်းကို ကျနော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ စာအုပ်အတုနဲ့ ငှားထားတာမဟုတ်ပဲ ထိုင်း NGO တခုက သူတို့အမည်နဲ့ ငှားပေးထားခြင်းပါ။
ဗျုရိုတာဝန်ခံက ကိုခင်မောင်ဝင်း၊ သတင်းထောက်က ကိုမိုးအေးနဲ့ ကျနော်။ ရုံးတာဝန်ခံက ကိုမင်းဇော် ရွှေ၊ ထိုင်းစကားပြန်က ကိုတင့်ဇော်တို့ဖြစ်ပြီး ထမင်းချက်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးအတွက်တောင် အချိန်ပိုင်း ၀န် ထမ်းတဦး ငှားထားလိုက်ပါသေးတယ်။ ဆိုတော့ နယ်စပ်နဲ့ဘန်ကောက်က ABSDF ရုံးခန်းတွေမှာ သာနေဖူးတဲ့ ကျနော်အတွက်တော့ DVB ရုံးခန်းက အတော်သားနားလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးချင် တော့ အဲဒီရုံးခန်းမှာ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်က ၃ လတောင်မကြာလိုက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ရှေ့မှာ တင်ပြခဲ့တဲ့ သံရုံးသိမ်း ကျောင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုဂျော်နီနဲ့ရတဲ့ အင်တာဗျုးကို လွှင့်ပြီးကတည်းက ပြေးလိုက်ရတာ အခုချိန်ထိပါပဲ။
သံရုံးသိမ်း သေနတ်သမားနှင့် အင်တာဗျုးခြင်း
ကိုဂျော်နီနဲ့ အင်တာဗျုးရပုံကလည်း ထူးခြားလှပါတယ်။ မနက် ၁၁ နာရီလောက်ကတည်းက သံရုံးဝင် စီးခံရတဲ့သတင်းကို ကြားနေရပေမယ့် ထိုင်း TV မှာ ပြနေတဲ့ပုံတွေက သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြပွဲ ဓာတ်ပုံဟောင်း တွေဆိုတော့ သိပ်မသေချာလှပါ။ “သံရုံးသတင်းက တကယ်ဖြစ်နေတာနော်။ သေနတ်သံတွေတောင် ကြားရတယ်လို့ TV ထဲမှာ ပြောနေတယ်” ဆိုပြီး ထိုင်းစကားကျွမ်းတဲ့ DVB ဘန်ကောက်ရုံး ထိုင်း ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ ကိုတင့်ဇော်က ပြောပါတယ်။
(သံရုံးသိမ်း စွမ်းအားမြင့်စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုဂျော်နီကို သံရုံးအတွင်းတွေ့ရစဉ်)
ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ဟိုဖုန်းဆက်၊ ဒီဖုန်းဆက် လျှောက်မေးတော့ မနီလွိုင်စခန်းက ကျောင်းသားတွေ လည်းပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်ကတောင် သူတို့အဖွဲ့ ကြေညာချက်တခု ထုတ်ထားသေးတယ်ဆိုပြီး အစအန တွေရလာပါတယ်။ တချိန်းတည်းမှာပဲ TV သတင်းတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သံရုံးအခြေအနေ အသေးစိတ်ပါလာပြီး သတင်းထောက်အတော်များများ သံရုံးရှေ့ ရောက်နေကြပါပြီ။ ကျနော်လည်း တ ခြားသတင်းထောက်တွေလို သံရုံးရှေ့သွားချင်ပေမယ့် အဲဒီအချိန်အထိ ကျနော့်လက်ထဲမှာ မြန်မာစာ အုပ်အတုကလွဲပြီး ဘာသတင်းကတ်မှ မရှိသေးပါ။
အဲဒီလို ဘာ ID မှ မရှိတာကိုက ကံကောင်းသွားတယ် ပြောရမလားပါပဲ။ တခြားသတင်းထောက်တွေ သံရုံးရှေ့ပြေးနေချိန်မှာ သူတို့လို မပြေးနိုင်တဲ့ကျနော်က ရုံးခန်းကျဉ်းကျဉ်းထဲမှာ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ် ဆက် ရင်းနဲ့ NGO သတင်းရပ်ကွက်ဆီကနေ သံရုံးဖုန်းနံပတ်တခု ရလိုက်ပါတယ်။ ရမ်းသမ်းပြီး နှိပ်ထည့် လိုက်တော့ “ဆ၀ါဒီခပ်” ဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်တဲ့လူက ထိုင်းလိုပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူ့အသံ ထိုင်းအသံ မပေါက်ဘူးဆိုတာကို ရိပ်မိတာနဲ့ ထိုင်းလိုပြန်မပြောတော့ဘဲ “ကျနော် DVB ကပါ။ အဲ …” ဆိုပြီး စကား ဆက်ဖို့ အရှိန်ယူနေတုန်း။
“DVB နော်ဝေလား။ ဘယ်သူလဲမသိဘူး” ဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ပြန်မေးပါတယ်။ တကယ်က ကျနော့်သတင်းထောက်အမည် ”ထက်အောင်ကျော်” ဆိုတာကို ပြောရမယ့်အစား မေ့ပြီးတော့ အမည် ရင်းဖြစ်တဲ့ “၀င်းထိန်ပါ … ကျနော်။ ခင်ဗျားတို့ အဲဒီ … ဟိုကိစ္စ ဘာပြောလို့ရမလဲ၊ နောက်ဆုံးအခြေနေ” ဆိုပြီး အစီစဉ်တကျမဟုတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ထွက်သွားပါတယ်။
”သြော် … နော်ဝေးအသံကိုလား။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့သိမ်းထားတယ်။ သံရုံးကို စီးထားလိုက်ပြီ” ဆိုပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။ တကယ်က အဲဒီအချိန်မှာ အသေချာ မေးခွန်းဆက်မေးရမယ့်အစား အ တွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ သတင်းထောက်ပီပီ “ဒီနံပါတ်က သံရုံးနံပါတ်ဟုတ်ပါတယ်နော်” ဆိုပြီး သွားမေး မိပါတယ်။ တော်သေးတယ်။ ဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်က စိတ်ဆိုးပြီး ဖုန်းချမသွားလို့။ ပြီးတော့ ကျနော်စမေး တဲ့ မေးခွန်းကကြည့်ပါဦး၊ “ခင်ဗျားတို့ ဘာပြောချင်လဲ။ ပြောချင်တာတွေအကုန်လုံး ပြောထားခဲ့ဗျာ” တဲ့။
“ကျနော်ဘာမှ မပြောနိုင်သေးဘူး။ စတိတ်မန့်ထဲမှာ ပါသလောက်ပဲ ပြောနိုင်ဦးမယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်း သားအားလုံးလွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ကျနော်တို့ တောင်းထားပါတယ်။ ခင် ဗျား စတိတ်မန့် ရပြီးပြီမို့လား” လို့ ပြန်မေးပါတယ်။ မရသေးရင် Fax နံပါတ်ပေး၊ သူပို့ပေးမယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။ ကျနော်တို့ရုံးက တရားဝင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် သတင်းဌာနအဖြစ် မှတ်ပုံတင်လုပ်ထားတဲ့ ရုံးမဟုတ်။ ဆိုတော့ ဒီလိုပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အရပ်ဆီ Fax နံပါတ်ပေးလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ဒါနဲ့ အသံနဲ့ လိုချင်လို့ပါ။ ဘာညာ ညှိရတာ ၁ မိနစ်လောက်ကြာသွားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကျနော်မေးမယ်၊ ခင်ဗျား ဖြေဗျာဆိုပြီးပြောတော့ “အိုကေ” လို့ သူကဆိုပါတယ်။
ဓားစာခံကိစ္စ အင်တာဗျုးအတွက် အထူးလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုမလား
ခင်ဗျားတို့က ဘယ်အဖွဲ့ကလဲ။ ဘာကြောင့် အခုလိုဝင်စီးတာလဲ ဆိုပြီး စမေးဖြစ်ပါတယ်။ “ကျနော်တို့ က ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လက်အောက်ခံမှမဟုတ်ဘူး။ Vigorous Burmese Students Warrior စွမ်းအားမြင့် မြန်မာကျောင်းသားစစ်သည်တော်များအဖွဲ့။ ဘယ်အဖွဲ့နဲ့မှ မဆိုင်ဘူး။ အခုမှ အသစ်ဖွဲ့တဲ့ အဖွဲ့” ဆိုပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာကြောင့်ဝင်သိမ်းလဲဆိုတော့ ဒီကောင်တွေက ပြည်သူကရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားတဲ့ လူတွေမဟုတ်ဘူး။ သူ့ဟာသူ သေနတ်နဲ့ အာဏာသိမ်းပြီး လျှောက် လုပ်နေတာ။ ကျနော်တို့က တော်လှန်ရေးသမားတွေပဲ။ ပြည်သူဘက်က လူတွေပဲ။ ဒါကြောင့် ၀င်သိမ်း တာလို့ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။
(VBSW စွမ်းအားမြင့်စစ်သည်တော်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ ဓားစာခံများ)
ဒီကိစ္စကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ။ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ညှိမှာလားဆိုပြီး ဆက်မေးတော့ “မိထားတဲ့ ဓားစားခံတွေကိုဖမ်းပြီး တော်လှန်ရေးနယ်မြေကို ပြန်ဆုတ်မယ်။ ထိုင်းနဲ့ ညှိမယ်။ ထိုင်းကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာသံရုံးဟာ မြန်မာပိုင်နက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ လက်နက်ချဖို့ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့နဲ့အတူ မဟာမိတ် God Army လည်း ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ Mediator လိုင်း ကနေ ၀င်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ မဟုတ်ရင် အားလုံးသေကုန်မယ်။ လက်နက်ချဖို့မရှိဘူး” ဆိုပြီး အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆက်ပြောပါတယ်။
''ခင်ဗျားတို့အင်အားက ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ဖမ်းထားတဲ့ ဓားစားခံဦးရေကော ဘယ်လောက်ရှိလဲ'' ဆို ပြီးကျနော်က ဆက်မေးတော့ သူက အတိအကျမဖြေပဲ လှည့်ပတ်ဖြေသွားပါတယ်။ တကယ်က အဲဒီလို အရှိန်ကောင်းနေတုန်း မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်စိတ်ထဲ ဒီလူသံရုံးထဲနေ တကယ်ပြောနေတာရော ဟုတ်ရဲ့လား။ သံရုံးနံပါတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီး သံသယ ထပ်ဝင်လာပြန်ပါတယ်။ “ခင်ဗျား သံရုံးထဲကပြောနေတာ ဟုတ်ပါတယ်နော်။ ခင်ဗျားနာမည်နဲ့ တာဝန် ကို ပြောနိုင်မလားဗျ။ ကျနော် အတည်ပြုချက် ယူချင်လို့ပါ” ဆိုပြီး သွားမေးမိပြန် ပါတယ်။
”နာမည်။ နာမည်က အကုန်လုံးသိနေပြီဗျ။ By Name နဲ့တောင် Fax တွေဝင်လာနေပြီ။ ကျနော့်နာမည် ဂျော်နီပဲ” ဆိုပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်က ဖြေပါတယ်။ ပြီးတော့ သေနတ်သံတွေ၊ မှန်ပြတင်းကွဲသံတွေ ကြားလိုက် ရပါတယ်။” ဒါပဲနော်။ ကျနော် ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ စကားပြောရဦးမယ်” လို့ပြောပြီး ဖုန်းချသွားပါ တယ်။ အဲဒါဟာ အတွေ့အကြုံ နုသေးတဲ့ သူပုန်လူထွက်ခါစ သတင်းထောက်ပေါက်စနဲ့ မြန်မာသံရုံးကို စီးထားသူ သေနတ်သမားတို့ရဲ့ ပထမဆုံး အင်တာဗျူးပါပဲ။
တကယ်ကတော့ နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေမှာဆိုရင် ဒီလို အကြမ်းဖက်စီးနင်းမှုတွေ၊ ဓားစာခံကိစ္စ တွေအတွက် အထူးသတင်းထောက်တွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်အတွက် အထူးလေ့ ကျင့်ထားတဲ့ သတင်းသမားတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မြန်မာသတင်းလောကမှာတော့ အခုချိန် အထိ ဒါမျိုးလေ့ကျင့်ထားတာ၊ ဒီဘာသာရပ်ကို သင်ကြားတယ်ဆိုတာမျိုး မကြားမိသေးပါဘူး။ နောက် တခါ ဒီလိုဖြစ်ရပ်ဟာ ဆယ်နှစ်လောက်ကြာမှ တခါလောက် ပေါ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုတော့ ခန့်မှန်းဖို့ သိပ် မ လွယ်။ နီးတဲ့လူ၊ ဖုန်းရတဲ့လူကပဲ မေးလိုက်တာ သဘာဝကျတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါက အခုမှ စဉ်းစားမိတဲ့ အချက်တွေပါ။ အဲဒီအချိန်ကတော့ ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြစ်နေပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာ ကိုင်ရမှန်းမသိပါ။ ဒီအင်တာဗျူး ပြီးသွားတဲ့အထိ ကျနော့်စိတ်ထဲ ယုံတ၀က်၊ မယုံတ၀က်ဖြစ်နေဆဲ။ ဒီ လိုနဲ့ အော်စလိုရုံးက ဖုန်းခေါ်လာချိန်ကိုတောင် မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ်ကပဲ အရင်ခေါ်ပြီး သံရုံး ကိုစီးထားတဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ အင်တာဗျုးရထားတဲ့အကြောင်း၊ အမြန်ပို့ချင်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါ တယ်။ အဲဒီအချိန် အော်စလိုရုံးတာဝန်ကျ သတင်းအယ်ဒီတာက ကိုဝင်းနိုင်ဦး (နောက်ပိုင်း RFA ကို ပြောင်းသွားသူ) ဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း ကျနော်အင်တာဗျုးရတာကို အတော်အံ့သြနေပုံရပါတယ်။ ကျ နော် ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ဘာသာ အံ့သြနေဆဲ။ ။
June 18, 2014 at 2:30 PM Reply
ကိုကျော်နီ အမှတ်တရအဖြစ် ၁၉၉၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလထုတ် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းပါး ဆောင်းပါးကို ကူးယူဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုဂျော်နီပုံပါတဲ့ ကာဗာဓာတ်ပုံကိုပြန်ရှာနေပေမဲ့ အခုထိ မတွေ့သေးပါ။ ရှိသူများ မျှဝေပေးစေချင်ပါကြောင်း...။
By The Irrawaddy OCTOBER, 1999 - VOLUME7NO.8
It was an amazing event: A group of armed student activists stormed the Burmese embassy in Bangkok on the first of October, turning their backs on eleven years of passive resistance and non-violent struggle. Aung Zaw, who at the scene to cover the hostage drama, examines the reasons behind this apparent about-face.
Kyaw Ni decided to join his friends after learning of their planned protest. “It wasapurely non-violentgathering,” saidagroup leader years later. The next day, 38 Burmese activists including Kyaw Ni went to the Immigration Detention Center (IDC) in Bangkok, where they staged an hour-long silent sit-in protest. Their objective was to ask the Thai government to allow Burmese activists to stay in the country.
This was in 1991. The 38 Burmese students who quietly sat down to express their demands inapeaceful way made an impressive sight. The activists, all dressed in white shirts and black trousers, looked pleasant and polite. It wasatrue Gandhi-style peaceful gathering.
But the hour-long sit-in protest did not achieve anything. The protestors were simply rounded up and taken into the Special Detention Center (SDC) where two former hijackers, Ye Yint and Ye Thiha, were also being detained. Kyaw Ni and his friends were held for almost 8 month at the SDC, where they met the two hijackers.
“He wasaquiet kid who didn’t talk much,” recalledaformer friend of Kyaw Ni.
On October 1, the sound of gunfire could be heard coming from the Burmese embassy in Bangkok. The news spread quickly that five Burmese activists had stormed the embassy compound and were holding 38 people hostage. A hostage-taker appeared at the embassy gate holding an AK47 in one hand andahand grenade in the other. Friends immediately recognized him. It was Kyaw Ni, or “Johnny,” as the media called him.
Gandhi is no longer Kyaw Ni’s ideal. The embassy siege was carried out desperado style, with five Burmese activists storming into the embassy compound with guitar cases containing guns. The moment they were inside, the guns came out. Their mission had started. The fighting peacock flag, the emblem of the Burmese pro-democracy struggle, was raised on the embassy flagpole, replacing the official Union of Myanmar flag. Thirty-eight people, including embassy officials and foreigners, were held hostage whileafurther 51 people hid inside the compound.
Ambassador U Hla Maung,astaunch supporter of the junta andaclose associate of powerful Burmese leader Lt-Gen Khin Nyunt and other high-ranking officials, narrowly escaped the siege. The embassy drama might have ended very differently if the five radical activists had been able to apprehend the ambassador, who had left the embassy just five minutes earlier.
A few hours later, faxes were sent to media organizations. The “Vigorous Burmese Student Warriors,” as the hostage-takers called themselves, wereanew group on the Burmese dissident scene. But their three demands were not new. They called on the military regime in Rangoon to release all political prisoners, startapolitical dialogue with the main democratic opposition party, the National League for Democracy, and convene parliament, which had not been called since the NLD wonalandslide victory in free elections held in 1990.
By late afternoon, however, Johnny and his group had changed their demands to just one:ahelicopter to take them back to the Thai-Burma border. Puzzled Thai officials said that throughout their negotiations with Johnny, he rarely mentioned the original demands but kept asking forahelicopter.
June 18, 2014 at 2:38 PM Reply
June 19, 2014 at 7:04 AM Reply
ကိုဂျော်နီအမှတ်တရပြီးတော့ DVB အမှတ်တရအဖြစ် ဒေါ်လာ ၃ သိန်း လာဘ်စားပြီး Burma VJ က ၀ယ်ထားလို့ DVB ကပြန်သ်ိမ်းယူထားတယ်ဆိုတဲ့ ဘန်ကောက်ရုံးခန်းကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါ တယ်...။
(ဒီနေရာမှာ ဓာတ်ပုံတင်မရလို့ အဲဒီအကြောင်းရေးထားတဲ့ အောက်ပါ links အတွင်း ၀င်ကြည့်ကြပါရန်...)